Anya ndị nne na nna | Lọ Akwụkwọ Oakleigh na Early Early Intervention Center
Kekọrịta echiche gị site na nne na nna
Ndị nne na nna na ndị nlekọta nwere ike inye echiche ha banyere ụlọ akwụkwọ anyị n'oge ọ bụla n'afọ akwụkwọ yana n'oge nyocha ụlọ akwụkwọ site na iji mpempe akwụkwọ ntanetị a na-akpọ Parent View.
Iji mejupụta mpempe akwụkwọ dị mkpirikpi na https://parentview.ofsted.gov.uk, ị chọrọ nanị adreesị ozi-e na paswọọdụ ịdebanye aha. Ebe ọ na-ekwu 'ọchụchọ', pịnye na Oakleigh ma ọ bụ Acorn na N20 0DH dị ka koodu koodu (ọbụlagodi na nwa gị na-aga Acorn na Colindale).
Ozugbo nbanye gị abanyela, ọ na-ewe nkeji ole na ole ịhọrọ azịza nke obere ajụjụ 14 gbasara Acorn / Oakleigh School.
Biko lee: https://parentview.ofsted.gov.uk/how-to-use maka nyocha ngwa ngwa banyere otu esi eji Nlele Ndị Nne na Nna.
Ọ bụrụ n’itụchala akwụkwọ nyocha Parent View, ị nwere ike ibugharịa echiche gị, ọ ga - edegharị nzaghachi gị n’oge gara aga ka ọ bụrụ naanị otu ‘nlele’ maka ndị nne na nna na ndị nlekọta na ụlọ akwụkwọ ọ bụla. Ọ bụrụ n ’imechaa ajụjụ a n’afọ akwụkwọ gara aga, biko mee ya ọzọ n’ihi na nsonaazụ ya dị ọhụụ n’ụlọ akwụkwọ ọ bụla
Echiche gị dị mkpa iji nyere ndị nyocha aka ịme mkpebi gbasara ụlọ akwụkwọ anyị, yana iji nyere anyị aka ịmata ihe na-aga nke ọma yana ihe aga - eme.
Ọ bụrụ na ịnweghị kọmputa ma ọ bụ adreesị ozi-e ma ọ bụ ọ bụrụ na ịchọrọ enyemaka iji Nlekọta Ndị Nne na Nna, biko bata ma jụọ ebe a na-anabata ndị ọbịa. Biko mee ka anyị mata ma ọ bụrụ na ị gbanweela nọmba mkpanaka gị na / ma ọ bụ adreesị ozi-e ka anyị nwee ike imelite ndekọ anyị.
Nkwupụta na ajụjụ dị n'okpuru, yana ihe atụ nke ihe nke a nwere ike ịgụnye na Acorn / Oakleigh na edemede, ebe anyị chere na nke a nwere ike inye aka:
Nwa m nwere obi ụtọ na ụlọ akwụkwọ a.
Nwa m gosipụtara na ọ nwere ahụ iru ala na afọ ojuju, ọ dị ka ọ na-enwe obi ụtọ na mmemme, ọ na-enwe obi ụtọ ịhapụ, nwee obi ụtọ mgbe m hapụrụ ma ọ bụ nwee obi ụtọ mgbe m hapụsịrị ya na Acorn / Oakleigh.
Nwa m nwere obi iru ala na ụlọ akwụkwọ a.
Ndị ọrụ mara nwa m nke ọma, ọ tụkwasịrị obi, nwee obi iru ala, nwee mmasị ịga Acorn / Oakleigh, a zụrụ ndị ọrụ iji dozie mkpa ahụike na omume, ụlọ ahụ nwere nchebe
Thelọ akwụkwọ a na-ahụ na ụmụ akwụkwọ ya na-akpa ezigbo agwa.
Atụmatụ Nkwado Omume, kpọtụrụ m iji kwurịta echiche, kpọtụrụ m ma nwatakịrị ọzọ merụrụ nwa m ahụ
Nwa m emekpala ahụ ụlọ akwụkwọ megbakwara mmekpa ahụ ngwa ngwa na nke ọma.
N'ihi ọdịdị nke mkpa ụmụaka, anyị ekwenyeghị na omume ọ bụla na-adịghị mma nke ezigara nwa akwụkwọ ọzọ bụ 'iji ike emegbu mmadụ', ị nwere nhọrọ nke ịhọrọ 'Egwubeghị nwa m'
Thelọ akwụkwọ a na-eme ka m mata ihe nwa m ga-amụta n’afọ ahụ.
Akwụkwọ ozi si n'aka Isi na Okwu Isi Okwu, EHCP Nsonaazụ, ebumnuche PLP, echiche njem njem isiokwu, akwụkwọ ụlọ / ụlọ akwụkwọ, ekwentị / ozi ịntanetị, Nzukọ Nyochaa Kwa Afọ, Nleta Homelọ
Mgbe m kwuchara nsogbu banyere ụlọ akwụkwọ, a na-edozi ha nke ọma.
Also nwekwara nhọrọ nke ịhọrọ 'Enweghị m nsogbu ọ bụla'.
Nwa gị, ọ nwere mmuta mmụta pụrụ iche na / ma ọ bụ nkwarụ (SEND)? (Ee ma ọ bụ mba). Mgbe ị zara ‘ee’ nnyocha a na-ajụ gị etu ị kwenyesiri ike n’okwu a ‘Nwa m zitere, ụlọ akwụkwọ ahụ na-enyekwa ha nkwado nke ga-eme ka ịga nke ọma.’
Ndị ọrụ mara mkpa nwa m, mmemme iji zụlite nka na nkwukọrịta, Drama / Movement na ọgwụgwọ ọgwụ, Otu Nkwado Ezinụlọ
Lọ akwụkwọ a nwere atụmanya dị elu banyere nwa m.
Ihe EHCP, PLP zubere, Atụmatụ Nkwado Omume
Nwa m mere nke ọma n’ụlọ akwụkwọ a.
Nwa m na-egosi nka ọhụụ n’ụlọ. Enwere m ike ịhụ ọganiihu pere mpe, ebumnuche PLP, Ọganiru / Nyochaa Kwa Afọ, Tapestry, oku ekwentị, ọnụ ọgụgụ nyocha
Schoollọ akwụkwọ a na-eme ka m mara ka nwa m si eme.
Tapestry, Nyochaa kwa afọ, Homelọ / Akwụkwọ Schoollọ Akwụkwọ, email / oku ekwentị.
Enwere otutu ihe omumu banyere nwa m na ulo akwukwo a.
Isiokwu ndị dị egwu, ahụmịhe ndụ na ndụ, Nleta Mmụta na obodo
Nwa m nwere ike itinye aka na klọb na ihe omume na ụlọ akwụkwọ a.
Klọb Lunchtime, Mgbe Afterlọ Akwụkwọ Gụsịrị Akwụkwọ, Playscheme, ihe omume egwuregwu
Schoollọ akwụkwọ a na-akwado mmepe nke onwe m nwa m.
Trainingzụ ụlọ mposi, nka iri / ị drinkingụ ihe ọ ,ụ ,ụ, nka mmekọrịta mmadụ na ibe ya, nkwado omume, ahụmịhe nke ndị obodo, mgbanwe site na klaasị gaa na klaasị, Otu Nkwado Ezinụlọ.
Aga m akwado ụlọ akwụkwọ a maka nne na nna ọzọ. (Ee ma ọ bụ mba)